ယောကျြားလေးပဲ ဖွဈဖွဈ မိနျးကလေးပဲ ဖွဈဖွဈ တကယျခဈြမိသူမှာ မကျြရညျတှမေကငျးပါဘူး … - ONE DAILY MEDIA
ယောကျြားလေးနဲ့မိနျးကလေး ဘယျသူပိုခဈြတတျသလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးက ဖွဖေို့တောငျမလိုပါဘူး .. အခဈြဆိုတာ ဖိုမသဘာဝနဲ့မဆိုငျနဲ့ ခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ပဲ သကျဆိုငျတာပါ ခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားသာ ရှိနမေယျဆိုရငျ ဘဝမှာတဈကွိမျတဈခါလောကျတော့ မကျြရညျတှေ ကဖြူးကွလိမျ့မယျ …
မကျြရညျလှယျလိုကျတာတဲ့ .. မကျြရညျတှကေစြတေဲ့အထိ ခဈြခဲ့မိတာပါလို့ပွောရငျ ပိုတယျဖွဈဦးမယျ တကယျကို ခဈြခဲ့မိတာ … ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးတှကေို တကယျမကွညျ့ပဲ သူဖွဈနလေို့ကို ခဈြနမေိတာဆိုတဲ့အထိ ခဈြဖူးခဲ့တယျ
အခဈြဆိုတာကလဲခကျတယျ … သိပျခဈြမိတဲ့သူကြ ဘယျတော့မှ သူ့ကို သဲသဲလှုပျခဈြမိသူတဲ့ မဆုံရတတျဘူး ကိုယျ့ကို ပဈထားတဲ့သူ ကိုယျ့အခဈြကို တနျဖိုးမထားတဲ့သူကိုမှ ကိုယျက တမျးတမျးစှဲခဈြမိသလိုဖွဈနတေတျတာလေ … တဈခါတဈလဆေို ကိုယျ့ကိုမခဈြတဲ့သူကို ခဈြမိနတေဲ့အဖွဈမြိုးတှလေဲ ရှိပါတယျ …
အခဈြတဲ့ … နှလုံးသားနဲ့နငျ့နငျ့ကာကာခဈြမိတဲ့သူတိုငျးမှာ ယောကျြားလေးပဲဖွဈဖွဈ မိနျးကလေးပဲဖွဈဖွဈပေါ့ မကျြရညျတှမေကငျးတတျကွဘူး ရငျနဲ့ရငျးပွီးခဈြမိပွီဆိုကတညျးက အရာရာကို ရငျဘတျနဲ့ရငျးပွီး ခံစားရတာပဲလေ သူ ဂရုမစိုကျတာကအစ သူအလေးမထားတာအဆုံး ကိုယျ့မှာ တဈစိုကျမတျမတျငေးရငျး နာကငျြရတာပါပဲ …
ကိုယျလှမျးနတေဲ့အခါနဲ့ သူ ပဈထားတဲ့အခါ အခြိနျကိုကျကသြှားတဲ့အခါဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးပေါ့…. ကိုယျက လှမျးလို့ဖုနျးတှဆေကျပမေယျ့ သူ့အတှကျ အနှောငျ့အယှကျသကျသကျပဲလေ .. ဒီအဖွဈအပကျြတှကေို သိပျခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားတှကေ ခံနိုငျရညျမရှိတတျကွဘူး …
ယောကျြားလေးပဲဖွဈဖွဈ မိနျးကလေးပဲဖွဈဖွဈပါ တကယျခဈြမိတဲ့သူမှာ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှမေကငျးတတျကွသလို မကျြရညျတှလေဲ မကငျးကွဘူး …
ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ်ချစ်မိသူမှာ မျက်ရည်တွေမကင်းပါဘူး …
ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေး ဘယ်သူပိုချစ်တတ်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးက ဖြေဖို့တောင်မလိုပါဘူး .. အချစ်ဆိုတာ ဖိုမသဘာဝနဲ့မဆိုင်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာပါ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားသာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ မျက်ရည်တွေ ကျဖူးကြလိမ့်မယ် …
မျက်ရည်လွယ်လိုက်တာတဲ့ .. မျက်ရည်တွေကျစေတဲ့အထိ ချစ်ခဲ့မိတာပါလို့ ပြောရင် ပိုတယ်ဖြစ်ဦးမယ် တကယ်ကို ချစ်ခဲ့မိတာ … ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကို တကယ်မကြည့်ပဲ သူဖြစ်နေလို့ကို ချစ်နေမိတာဆိုတဲ့အထိ ချစ်ဖူးခဲ့တယ်
အချစ်ဆိုတာကလဲခက်တယ် … သိပ်ချစ်မိတဲ့သူကျ ဘယ်တော့မှ သူ့ကို သဲသဲလှုပ်ချစ်မိသူတဲ့ မဆုံရတတ်ဘူး ကိုယ့်ကို ပစ်ထားတဲ့သူ ကိုယ့်အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူကိုမှ ကိုယ်က တမ်းတမ်းစွဲချစ်မိသလိုဖြစ်နေတတ်တာလေ … တစ်ခါတစ်လေဆို ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူကို ချစ်မိနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ် …
အချစ်တဲ့ … နှလုံးသားနဲ့နင့်နင့်ကာကာချစ်မိတဲ့သူတိုင်းမှာ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ မျက်ရည်တွေမကင်းတတ်ကြဘူး ရင်နဲ့ရင်းပြီးချစ်မိပြီဆိုကတည်းက အရာရာကို ရင်ဘတ်နဲ့ရင်းပြီး ခံစားရတာပဲလေ သူ ဂရုမစိုက်တာကအစ သူအလေးမထားတာအဆုံး ကိုယ့်မှာ တစ်စိုက်မတ်မတ်ငေးရင်း နာကျင်ရတာပါပဲ …
ကိုယ်လွမ်းနေတဲ့အခါနဲ့ သူ ပစ်ထားတဲ့အခါ အချိန်ကိုက်ကျသွားတဲ့အခါဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပေါ့ …. ကိုယ်က လွမ်းလို့ဖုန်းတွေဆက်ပေမယ့် သူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်သက်သက်ပဲလေ .. ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေက ခံနိုင်ရည်မရှိတတ်ကြဘူး …
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တကယ်ချစ်မိတဲ့သူမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေမကင်းတတ်ကြသလို မျက်ရည်တွေလဲ မကင်းကြဘူး …